अक्षय र रजनीकान्तको ‘२.०’ले रच्यो इतिहास, एक सातामै कमायो ५०० करोड ! - Koshi Online
अक्षय र रजनीकान्तको ‘२.०’ले रच्यो इतिहास, एक सातामै कमायो ५०० करोड !
अभिनेताद्वय रजनीकान्त र अक्षय कुमारको मुख्य अभिनय रहेको बलिउड फिल्म ‘२.०’ले नयाँ इतिहास रचेको छ । यस फिल्मका सह वितरक करण जोहका अनुसार यस फिल्मले एक सातामै ५०० करोड कमाउँदै नयाँ कीर्तिमानी बनाएको हो ।
करणले बिहीबार एक ट्वीटमार्फत् यस फिल्मले नयाँ कीर्तिमानी बनाएको बताएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘मेगा ब्लकबस्टर हुन इतिहास रच्दै ‘२.०’ । फिल्मको विश्वव्यापी कमाई ५०० करोड ।’
गत बिहिवारदेखि प्रदर्शनमा आएको एस फिल्ममा अक्षय र रजनीकान्तबाहेक एमी ज्याक्सनको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । एस शंकरको निर्देशनमा बनेको सो फिल्मले मोबाइल फोनले चराचुरुङ्गीमा पार्ने प्रभावको कथा बोलेको छ ।